Ndị na -emepụta CCO Wear Plate | China CCO eyi efere Factory & suppliers
Eyi efere ịgbado ọkụ Waya
Ala ịrụzi Hardfacing ...
Mpempe mkpuchi carbide chromium a na -ahụkarị, dabara maka ojiji na ngwa iyi n'ozuzu metụtara mmetụta dị ala na ọkara.
Mpempe akwụkwọ: 1400*3400mm, 1500*3000mm, ndị ọzọ na -arịọ arịrịọ
Usoro WD1200/WD1500 Abrasion Resistant Chromium Carbide Overlay WD1200/WD1500 bụ ngwakọta ngwakọta carbide mejupụtara chromium carbide jikọtara na efere azụ azụ dị nro. Emebela nkwụnye ego ahụ site na ịgbado ọkụ arc. Efere WD1200/WD1500 dabara adaba maka ngwa metụtara oke mbibi na mmetụta dị ala na ọkara. Series Usoro WD1200/WD1500: akwa chromium dị elu nke na -eyi carbon na -emepụta site na ịgbado ọkụ arc; Kwesịrị ekwesị maka ngwa metụtara oke abrasion na ala ruo med ...
Usoro WD1600 Abrasion Resistant Chromium Carbide Overlay WD1600 bụ ngwakọta ngwakọta ngwakọta nke chromium carbide jikọtara na efere azụ azụ dị nro. Emebela nkwụnye ego ahụ site na ịgbado ọkụ arc. Efere WD1600 dị mma maka ngwa metụtara oke abrasion na ọkara ruo oke mmetụta. Usoro WD1600: efere na -eguzogide ọgwụ na -emetụta; Kwesịrị ekwesị maka ngwa metụtara oke abrasion na ọkara na oke mmetụta. Chemicals ekweghị ekwe mpempe akwụkwọ Size Base Metal C ̵ ...
WD1800 usoro Abrasion Resistant Chromium Carbide machie WD1800 bụ ngwakọta carbide mejupụtara ngwakọta cladding jikọtara na efere azụ azụ dị nro. Efere WD1800 dị mma maka ngwa metụtara oke abrasion na oke okpomọkụ ruo 900 ℃. Series Usoro WD1800: efere carbide dị mgbagwoju anya; Kwesịrị ekwesị maka ngwa metụtara oke abrasion na oke okpomọkụ ruo ogo 900. Chemicals Hardness Sheet Size Base Metal C - Cr - Nb - Mo - Ni ...
Efere carbide dị mgbagwoju anya, nke a bụ ka o kwekọọ na nkọwapụta efere eyi BHP 3.
Series Usoro WD1000/WD1100: Mpekere mkpuchi mkpuchi na -abụghị mgbawa; Ngwa pụrụiche dị na China emebere ka ọ rụọ ọrụ dị ka eriri ụlọ, na efere slide na igwe igwe nchara. Nha mpempe akwụkwọ siri ike nke Chemicals Base Betal C - Cr HRC50-55 - Nchara Nchara Dị Mfe: Ihe dị na Carbon na Chromium dịgasị na efere dị iche iche.